Ra’iisul Wasaare Khayre oo booqday waqooyiga Gaalkacy – Banaadir weyne
Ra’iisul Wasaare Khayre oo booqday waqooyiga Gaalkacy
Gaalkacyo – Bulshada ku nool dhanka waqooyi ee degmada Gaalkacyo ayaa garoonka kubbadda cagta Cawaale si wayn ugu soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo galabta socdaal kusoo gaaray dhanka waqooyi ee magaalada.
“Halyaayadii Soomaaliyeed waxa ay nooga tageen in Quluubta ummadda Soomaaliyeed marna xuduud kala yeelan karin. Gaalkacyo waqooyi iyo Koofurba waa Soomaali oo aan la kala qaadi karin.” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
“Shacabka iyo dowladda waa wadnaha iyo beerka qofka bini aadamka. Lama kala qaadi karo shacabka iyo dowladda.” ayuu yiri Mudane Xasan Cali Khayre.
Gabagabadii, Xasan Cali Khayre ayaa ballan qaaday in dowladdu ay dhisayso garoonka kubbadda cagta Cawaale ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug. – Hiiraan Online